( အပြန်လမ်းက နွမ်းလျသူ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( အပြန်လမ်းက နွမ်းလျသူ )	9
( အပြန်လမ်းက နွမ်းလျသူ )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Jun 13, 2015 in Creative Writing, Poetry |9comments
နွေမှာ ရေမရှိ ဆောင်းမှာဖြင့် သေအောင်အေး
ကြမ်းတမ်းမှုက ဖွဲ့မကုန် မြူမှုန်မှုန်တစ်နေ့မှာ
ကျနော် ထွက်ခွာလာခဲ့တယ် ၊
ဟိုးအဝေးကမြို့ဆီမယ် အလုပ်ရယ် တကယ်ပေါသမို့
မျှော်လင့်ချက်တို့ကို အဖော်ပြုလို့ ပေါ့ ၊
လက်ထဲကဘွဲ့လက်မှတ်ခမျာ ဘယ်နေရာမှ ဟန်မကျ
ဖုန်ထူထူဘိလပ်မြေကြား ပျော်ပါးနိူင်ခဲ့သူပါ ၊
နယ်စပ်သို့ခြေလှမ်းကာ ထွက်လာခဲ့တယ်အမေ ၊
သားကတော့ ပျော်လို့ပေါ့ ၊
နောင်တများနဲ့ခြေချုပ်ကျ လှုပ်လို့ကို မရဘူးအမေ
မရပ်တန်းပါပဲ အမေ ၊
ဒီလိုနဲ့ ငရဲသာသာဘဝမှာ အတော်ကြာခဲ့အပြီး
ကံကြီးလို့ လွတ်မြောက် အမိမြေပြန်ရောက်လာ
ရွာအပြန်ခရီးမှာဖြင့် အသွင်မဝံ့ အမြင်မတင့်လှ
သားလက်ထဲမှာ နောင်တတွေပဲ ပါခဲ့ပေါ့ ၊
မြစပဲရိုး says: အလုပ်လုပ်ချင်လွန်းလို့ အလုပ်ရမဲ့ နေရာ ရှာခဲ့ တာမို့
အဆင်မပြေခဲ့လဲ ရှက်စရာမလိုပါ လေ။
ကိုယ့်နိုင်ငံ ထဲ ရရာ အလုပ်လုပ်ပေါ့လို့ ပြောရမှာတောင် အားနာပါရဲ့။
ရွာမှာ တောင်ယာလုပ်စားတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အဆုံး မြို့တက်ပြီး ကားမောင်းစားနေတဲ့ တက်စီ ဒရိုင်ဘာ တစ်ယောက်ရဲ့ စကား တွေ ကြားခဲ့ရတယ်။
အလုပ်လုပ်ရမှာ မကြောက်ပါဘူး တဲ့။
လုပ်စရာ အလုပ် ကို မရှိလို့ တဲ့။
အဲဒါနဲ့ ရွာက နေ မြို့တက်လာရတော့ ရွာ ဘက်တွေမှာ ခြောက်ပြီးပြီး မစည်ကားနိုင်လေတော့ နိမ့်ပြီး ရင်း နိမ့်။
. မြို့ပေါ်မှာကျ ကျပ်သထက်ကျပ်ရင်း အလုပ်တွေ ပိုရှား။
. မြန်မာပြည်ထဲ မြေတွေ ဒီလောက်ပေါတာ။ လူ တွေ ဒီလောက် ပေါတာ။
ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်း စားနပ်ရိက္ခာ ဒီလောက် လိုနေတာ။
အဲဒီ လူတွေ အတွက် စေတနာထား ပြီး အာရုံစိုက် လိုက်ရင်ဘဲ ရွာတွေမှာလဲ ပြန်စည်ကားမယ်။
. မြို့ ရွာ ခြားနားမှု လဲ နည်းသွားမယ်။ လူတွေ အလုပ် ရှိသွားမယ်။
အခု တော့ မြင်မြင်ရာ ငါပိုင်လုပ် ပြီး တံဆိပ်ခတ်ထားချင်တော့ အားလုံး အကျိုးမဲ့ ကုန်ရော။
. စေတနာလဲ မရှိ၊ ဦးဏှောက်လဲ မရှိ အတ္တဘဲ သိ တော့ သူတို့ အတွက်ကလွဲလို့ ဘာကို မှ ကောင်းဖို့ လုပ်ပေးမယ် မှန်းမနေနဲ့။
ဆင်းရဲသား တွေ အတွက် လုပ်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိတာ အစိုးရပါ ဆိုတာ ကို လက်ခံ တဲ့ အသိ ကို မရှိ တာမို့ ပိုဆိုးနေတာ။
ဒါကိုမှ အပြုတ်မဖြုတ်နိုင်ကြရင် ပိုပြီး စုတ်ပြတ်လာဖို့ ဘဲ ရှိတယ်။
သူတို့ ချမ်းသာ တဲ့ ပမာဏ က နိုင်ငံ သားတွေ ရဲ့ ဆင်းရဲခြင်း နဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုး ကျနေတာကိုး။
Ma Ma says: (လုပ်စရာ အလုပ် ကို မရှိလို့ တဲ့)
အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူက အလုပ်ရှားတယ်လို့ ညည်းတယ်။
အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမား မရှိဘူးလို့ ညည်းတယ်။
ဘာတွေလွဲနေလဲတော့ မသိ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says:့  အရီးရေ
စိမ်းလိုက်ပါတယ် ၊ ကောမန့်ပေးတဲ့ မမ နဲ့ ကိုပေါက်တို့ကိုလည်း ကျေးဇူးနော့
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရှေးအဆို ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရှာဖွေသွားပါလေတဲ့။
Mike says: .ဒီကဗျာလေးကတော့အတော့်ကိုနှစ်သက်မိပါတယ်…လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာတွေလည်းထင်ဟတ်နေပါရဲ့..
တောင်ပေါ်သား says: ကျေးဇူး ကိုမိုက်
ရောင်းစားခံဘဝက ပြန်လွတ်လာသူတွေသတင်းဖတ်ပြီး ရေးမိတာပါ ၊
အောင် မိုးသူ says: အလုပ်ဆိုတာရှာကြံပြီးလုပ် လုပ်စရာတွေ များမှများသား
manawphyulay says: အဲဒါကိုက မှားတာပါ။ အလုပ် လုပ်ချင်သူတွေအတွက် အလုပ်တွေက နေရာတကာမှာ ပေါပါတယ်။ လုပ်ချင်စိတ်ရှိဖို့သာ လိုတာပါ။ နောက်ပြီး ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်က ဘွဲ့ရသမားတစ်ယောက်အတွက် ကောင်းတဲ့အလုပ်လား မကောင်းတဲ့အလုပ်လားဆိုတာ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ သူများ ရောင်းကုန်ဖြစ်သွားကြသူများက တောခေါင်တဲ့နေရာကနေ မက်လုံးပေးပြီး ပညာမတတ်သူ အများစုနှင့် ဗဟုသုတ မသိတဲ့သူတွေအတွက်သာ ဖြစ်တာပါ။ မဟုတ်ဘူးလားဟင်…
တောင်ပေါ်သား says: ကဗျာအစမှာကတည်းက ရွာက လို့ ပါတယ်လေ ၊
မြို့ကလို အမြင်မကျယ်သေးတဲ့ တောသား ရွာသားတွေ ပြည့်လို့ ၊ တောရွာ တောမြို့လေးတွေမှာ အဝေးသင်ဘွဲ့ရပြီး တစ်ခြားဗဟုသုတ မရှိသူတွေ ရှိနေပါသေးတယ် ၊
အခု အင်တာနက်တွေနဲ့ သတင်းပေါင်းစုံကို ကြည့်နိူင် သိနိူင်ပေမယ့် အွန်လိုင်း မရှိတဲ့ မမိတဲ့နေရာတွေ အများကြီး ၊
ကိုယ်က သိမယ် တတ်မယ် အမြင်ကျယ်မယ် ဆိုဦးတော့ သူတို့တွေကတော့ ဝေးနေဦးမှာပဲ ၊
ပွဲစားရဲ့ ထိပ်ဆုံးပစ်မှတ်ကလည်း သူတို့တွေပဲလေ ၊
အမြင်ကျယ်လှချည်ရဲ့ ဆိုတဲ့ မြို့သားတွေတောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အလိမ်ခံကောင်းနေဆဲ ၊